လင်းတကျောဖြူ - ဝီကီပီးဒီးယား
White-rumped vulture in Mangaon, Raigad, Maharashtra
မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအန္တရာယ်ရှိ (IUCN 3.1)
လင်းတကျောဖြူ (Gyps bengalensis) သည် ကမ္ဘာဟောင်းလင်းတ ဖြစ်ပြီး တောင်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ဌာနေငှက်များဖြစ်သည်။ ယင်းငှက်သည် ကောင်ရေ လျောနည်းလာမှုကြောင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက IUCN အနီရောင်စာရင်း၏ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအန္တရာယ်ရှိသော မျိုးစိတ်စာရင်းတွင် စာရင်းသွင်းခံထားရသည်။ လင်းတကျောဖြူများသည် အဆိပ်ချသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးကာ သေဆုံးကြရသည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များတွင် လင်းတကျောဖြူများသည် တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကောင်ရေ သန်းချီရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းအချိန်က ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပေါများဆုံး သားကောင်ဖမ်းငှက်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ယုံမှတ်ရသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကောင်ရေ ၁၀,၀၀၀ အောက်သာ ရှိတော့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ BirdLife International (2017). "Gyps bengalensis". IUCN Red List of Threatened Species 2017. IUCN.
↑ Gmelin, J. F. (1788)။ "Vultur bengalensis"။ CaroliaLinné, Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis။ I (13th aucta, reformata ed.)။ Lipsiae: Georg Emanuel Beer။ pp. 245–246။
↑ Houston, D. C. (1985)။ "Indian White-backed Vulture (Gyps bengalensis)"။ in Newton, I.; Chancellor, R. D. (eds.)။ Conservation studies of raptors။ Cambridge, U.K: International Council for Bird Preservation။ pp. 456–466။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လင်းတကျောဖြူ&oldid=712404" မှ ရယူရန်
IUCN အနီရောင်စာရင်းရှိ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအန္တရာယ်ရှိသော မျိုးစိတ်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။